Agara m taa dịka onye ikpeazụ na-esote ha Na-agbaOru ngo ha kpebiri iweta n'ahịa ọzọ. Kedu ohere dị egwu na mmemme - ya na ndị bịara ya na ndị ọka ikpe si n'akụkụ ụwa niile. N'ime izu ndị na-abịanụ, m ga-ekpuchi ọtụtụ mmalite nke Sproutbox… ọtụtụ ga-ejikwa teknụzụ rụọ ụfọdụ na azụmaahịa.
Otu n'ime ihe ịga nke ọma nke Sproutbox bụ Chiedozie. Ọ bụ ezie na abụghị m nnukwu onye ofufe nke ika (ndo Sproutbox :)), ngwaahịa a bụ ọkaibe. CheddarGetter na-enye ohere ka azụmaahịa nwere ụdị ego na-enweta ugboro ugboro iji jikọta, soro ma gbaa ndị ahịa ha ụgwọ.